Moa ve ny rafitra manohitra fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 17 Janoary 2020	• 15 Comments
Tamin'ny 23 Jona 2019, ny Washington Post dia nanoratra fa ny hackers amerikana dia efa nitady rafitra manohitra fiaramanidina Iraniana, araka ny tatitra momba izany tweakers.net, izay mifandray amin'ny ny hafatra tany am-boalohany ao amin'ny tranonkala Washington Post. Na izany aza, nanova ity hafatra ity ilay tranokala:Ity tantara ity dia nasiam-panavaozana mba hanitsiana ny lasibatry ny fanafihana cyber amerikana an'i Iran. Izy io dia solosaina informatika izay nampiasaina hamolavola ny fanafihana ny tanky solika, fa tsy rafitra solosaina no hifehezana ny fandefasana balafomanga sy ny fandefasana rocket."
Ny fampifanarahana tanteraka an'io lahatsoratra io dia azo takarina ary ilaina, satria azo esorina amin'ny hafatra tany am-boalohany fa mahavita mandray ny rafitra anti-fiaramanidina Iraniana ny Etazonia; ny rafitra izay nanapoaka ny Boeing 737-800 (sidina PS752), niala tao amin'ny seranam-piaramanidina Tehran, tamin'ny 8 Janoary.
Ny tranonkala timesofisrael.com na izany aza, dia miresaka momba ny hack amerikanina fotsiny ary manazava fa ny fitrandrahana ireo rafitra ireo dia mety hitranga satria ireo rafitra ireo dia tsy mandeha irery, fa mifandray amin'ny alàlan'ny tambajotra. Ary raha vantany vao misy tambajotra tambajotra, dia mety hitranga ny fikorontanana avy any ivelany.
AFP - Ny fanafihana an-tserasera teo amin'ireo rafi-balafomanga Iraniana nataon'ny US tamin'ny herinandro lasa teo dia nahatonga ny fampiasana fahadisoana tao amin'ilay tambajotra be fiarovana, hoy ny manam-pahaizana. Ny loharanom-baovao ofisialy ao amin'ny haino aman-jery amerikana dia nitatitra tamin'ny herinandro lasa fa ny Tafika Cyber ​​Command dia niditra an-tsokosoko tao amin'ireo vondrona mpiaro ny fiaramanidina mpiambina an'habakabaka Iraniana Revolisionera Iraniana, izay nandrava drone mandroso tamin'ny 20 jona.
Ny fiarovana ny solosaina miaramila matetika dia 'hamafisina bebe kokoa' amin'ny famelezana, fa ny mpahay siansa mahay ao anatin'ny solosaina an'ny tafika maoderina dia miezaka foana mitady varavarana ao anatin'ny rafitra Iraniana.
I Iran dia niampanga an'i Etazonia sy i Israely tamin'ny fampiasana virus iray hamelezana ny centrifuges ampiasaina ho fanatsarana uranium. Nanomboka tamin'ny fanamafisana ny fepetra fitandremana ny mpiambina revolisionera amin'ny fikasana hanasaraka ny tambajotran'ny solosaina miaramila amin'ny Internet.
Hoy ny manam-pahaizana iray momba ny tafika iray izay mangataka anarana tsy fantatra anarana: “Ny rafitra anti-fiaramanidina dia mitaky ny radara, ny fanaraha-maso ary ny foibe fananganana ary ny toerana misy ny balafomanga. Ireo singa ireo dia mifandray amin'ny tambajotra intranet fa amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy mifandray amin'ny karazana Internet. Taloha dia tsy misy fomba hifandraisana amin'ny rafitra fitaovam-piadiana. Ny ankamaroan'ny rafitra fiasan'ny solosaina ara-barotra dia marefo amin'ny fanafihana, na dia vita aza ny zava-drehetra mba hahatonga azy ireo tsy ho voafitaka. Tsy misy azo esorina. "
Nomen'i Iran mba mahalala omaly dia miahiahy ny Etazonia sy ny Israeliana amin'ny hack toy izany. Nandeha haingana ny haino aman-jery tandrefana nilaza fa hanao izany i Iran izao ho fanonganana ny tambin-karama tonga amin'ny havan'ny lasibatra. Na izany aza, raha azo porofoina fa i Etazonia na i Isiraely (tanana roa amin'ny vavony iray) dia ao ambadik'izany hack izany, ny valiny dia mety ho lehibe. Samy hiatrika fahitana be loatra ny firenena roa tonta ary hahatsapa fahavitrihana fanampiny ny mponina any Afovoany Atsinanana handroaka ny tafika amerikana hiala ao amin'ilay faritra.
Na izany na tsy izany dia hita mazava fa tsy azontsika atao ny mihevitra fa ny haino aman-jery dia milaza amintsika ny marina. Raha tena nanafika ny rafitra fiaramanidina manohitra ny fiaramanidina amerikana i Etazonia, dia mety hanontany tena ihany ianareo hoe iza no tompon'andraikitra tamin'ny famoretana ny drone amerikana tamin'ny 20 jona 2019. Na dia voalaza aza izahay tamin'ny media tandrefana fa nanao izany i Iran noho ny drone. ny habakabaka Iraniana, tena tsy fantatsika intsony izay marina na hoe lainga fampielezankevitra. Angamba io fitsapana io dia fitsapana hahitana raha ny rafi-piadiana manohitra fiaramanidina Iraniana iray nitaona dia afaka nitifitra balafomanga (ary haka fiaramanidina iray). Fa maninona no notsofin'ny Washington Post avo be avy teo amin'ny tilikambo ilay hack mahomby amin'ny rafitra manohitra fiaramanidina Iraniana ary nahoana no novaina ity hafatra ity taty aoriana?
Ka raha afaka miatrika ny fanafihana ny masoivohonanao manokana ianao any Irà ny 31 Desambra 2019 dia manana alibi iray noforonin-tsary hitifitra ny jeneraly Qassem Soleimani manamarina ny fahamarinana hetsika), manery an'i Iran hamaly ianao. Amin'izay fomba hahafahanao mahazo tsara ny fahalemen'ny azy sy ny rafitrao.
"Fantaro ny fahavalonaoHoy Zun Tzu, mpiady amin'ny sinoa ary voalaza fa mpanoratra ny boky Ny zava-kanton'ny ady. Ary efa mazava ny sarin'ny fahavalo (Iran). Ny balafomanga an'ny Iraniana dia nanao fanapoahana baomba ny toerana amerikana Ain al-Asad sy Erbil tany Irak, nefa tsy namono olona. Tamin'izany no nanaporofoan'izy ireo ny teknolojia fa ny rafitra fiarovan'ny rivotra amerikana afaka mitrosa (ary noho izany tsy hita maso ny rafitra radar azy). Noporofoin'i Etazonia (mety ho indray) handray ny rafitra manohitra ny fiaramanidina Iran efa lany andro.
Ny fanontaniana dia hoe iza no handray soa amin'izany. Raha fantatr'i Iran ny fomba hidirana ireo rafitra manohitra ny fiaramanidina amerikana, dia afaka manafoana ny toerany izy ireo alohan'ny hisian'ny fihetsik'i Etazonia mihitsy ary tsy maintsy miaro ny habakabaka i Iran miaraka amin'ireo rafitra manohitra fiaramanidina azo vonoina. Ny fanontaniana lehibe kokoa dia inona no karazana fahamarinana azontsika ianarana amin'ny haino aman-jery. Araka ny nohazavaina ao ity lahatsoratra ity ary mbola feno kokoa ny bokiko, miatrika script maintso isika ary mitory amin'ireo fahavalon'ny sehatra hita maso izay manatratra ny tanjona farany any ambadiky ny sehatra misy antsika.
Lisitry ny rohy loharano: tweakers.net, washingtonpost.com, timesofisreal.com, zerohedge.com, zerohedge.com, Wikipedia, defensenews.com
Tags: 737-800, Malagasy, Boeing, Featured, Hack, Iran, Isiraely, Israeliana, fiarovan-tenan'ny fiaramanidina, PS752, Tehran, VS
17 Janoary 2020 ao amin'ny 12: 16
Henoy tsara ny hafatry ny Iraniana: Tokony hiala any Iràka ve i Etazonia, araka ny nangatahan'ny Parlemanta Irak, ary mifanaraka amin'ny fifanarahana nataony tamin'ny governemantan'i Baghdad, ary avy eo dia 'mandeha' avy any amin'ny faritra ny fanamorana ny raharaha ara-miaramila. Na izany aza, manizingizina ny hijanona ao Irak i Etazonia, ny herin'i Etazonia dia hiharan'ny tsindry politika sy miaramila hialana amin'izany - fa tsy avy amin'ny fanjakan'i Iran. Ho avy amin'ny mponina ao amin'ireo fanjakana itondrana ny herin'i Etazonia amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao, ny miaramila amerikana dia mety hovonoina (na dia tsy ny balafomanga Iraniana aza). Izany no safidin'i Amerika. Nitazona ny fandraisana andraikitra i Iran.
17 Janoary 2020 ao amin'ny 13: 14
17 Janoary 2020 ao amin'ny 16: 52
Ny tatitra dia manohy mampiseho fa ny fanafihana Iraniana dia namono olona. Fa iza no hanao ilay lasibatra voalohany dia ny fahamarinana foana.
17 Janoary 2020 ao amin'ny 17: 01
Vao avy any amin'ny zerohedge, 11 izao no naratra!? tsara
17 Janoary 2020 ao amin'ny 17: 15
ny lahatsoratra voalohany nesorina fa afaka nahita azy aho, tena hafahafa be.
Mazava ho azy fa ny sidina an'habakabaka Iraisam-pirenena Okrainiana 752 nandao ny seranam-piaramanidina Imam Khomeini Tehran, ny marainan'ny 8 Janoary, niaraka tamin'ny mpandeha 176 sy ny mpitondra sambo no voatifitry ny fiarovan'ny rivotra Iraniana, zavatra izay neken'ny governemanta ny Repoblika Islamika, fa tao izy fotsiny dia mety ho lehibe kokoa ny tantara momba ny ady sotaly nataon'ny Etazonia sy ny governemanta israelianina.
Etazonia dia manana ny fahafaha-miady amin'ny ady an-tserasera sy ny elektronika amin'ny roa tonta ary manova famantarana mifandraika amin'ireo mpandeha amin'ny fiaramanidina fiaramanidina ary amin'ny fiarovan'ny rivotra Iraniana. Azo inoana fa manana ny fahaizana mitovy amin'izany i Isiraely.
Ny sasany amin'ireo olona eny an-dalambe dia miantso mazava ny tanjona tadiavin'i Etazonia sy ny Isiraely, izany hoe "fiovan'ny fitondràna."
Raha mihazakazaka toy ny ganagana izy, ny gisa tahaka ny ganagana, ny vintana dia vina moka. Amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra miala amin'izany intsony ny ahiahy mahazatra.
139 maty ary 146 no naratra ..
17 Janoary 2020 ao amin'ny 20: 38
@zio, hafahafa rehefa namoaka an'io aho fa mavitrika ny url. Misaotra tamin'ny fanavaozana!
18 Janoary 2020 ao amin'ny 22: 28
eny dia maimbo amin'ny rivotra mandritra ny ora iray koa, manandrana mandà izany ny Pentagon na hanamaivana azy. Ka misy fahamarinana ao aminy
tamin'ny alàlan'ny Reuters
Pentagon dia nandà ny hanafika an'i Iran tsy hilentika
20 Janoary 2020 ao amin'ny 00: 47
gidro iray izay mivoaka avy amin'ny pataloha mandainga, porofo fa manana teknolojia i Iran hitarika fanafihana nokendrena ary hisorohana ny dian-tongotra radar. Jereo ihany koa ny fanafihana any Arabia Saodita momba ny fametrahana menaka, na dia eo aza ny teknolojia novidina tany Etazonia. Mampanantena izy fa ho taona mahaliana:
17 Janoary 2020 ao amin'ny 17: 17
Mpanoratra ilay lahatsoratra fikarohana eran-tany Phil Giraldi etsy ambony
18 Janoary 2020 ao amin'ny 16: 52
18 Janoary 2020 ao amin'ny 17: 09
raha variana amin'ny balafomanga ny olona rehetra sns ... dia mandeha any Machiavellian ny ahiahy mahazatra
19 Janoary 2020 ao amin'ny 22: 15
Ity ny gidro avy amin'ny ahitra:
19 Janoary 2020 ao amin'ny 22: 21
Eny Phil Giraldi dia mpandinika tsara izay zara raha marina momba ireo suspect mahazatra. Avy eo, aoka isika tsy hiresaka momba ny gidro izay tonga fa tsy manavakavaka
Jereo etsy ambony 😉
19 Janoary 2020 ao amin'ny 23: 04
ny tenanao dia faniratsirana ny gidro izany
19 Janoary 2020 ao amin'ny 23: 25
fombafomba sy teoria mahafinaritra nefa mijanona izany, hoy izy teo aloha.
Fa maninona ianao no mandrehitra rehefa manidina anao ny zavatra?
Ka tsy misy na inona na inona tokony hatahorany. Miandry ny tatitra an'ny Bellingcat 😉
« Hafiriana no nahitan'i Trump teo amin'ny lasabe izao fa hita maso ny famantarana voalohany amin'ny ady an-trano?
Ny lehilahy Transgender dia miteraka ny zanaky ny mpiara-miasa amin'ny varotra tsy roa lotra miaraka amin'ny mpamatsy vola ho an'ny vehivavy »
Total visits: 16.760.367